Dell Inspiron 14 5405 Laptop Silver (R7-4700U)-3 ~ ICT.com.mm
HomeDell Inspiron 14 5405 Laptop Silver (R7-4700U)-3
Dell Inspiron 14 5405 Laptop Silver (R7-4700U)-3
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ NB0020261 MOCKINGN514AMD2105104 AMD Ryzen(TM) R7 4700U Mobile Processor with Radeon(TM) Graphics 8GB, 1x8GB, DDR4, 3200MHz 512GB SSD M.2 PCIe NVMe Windows 10 Home 14.0-inch FHD (1920×1080) Anti-glare LED Backlight... [Learn more]
Brand: DellFilter by: 14", 512GB SSD, 8GB RAM, AMD Integrated Graphics, AMD Ryzen 7, KMD, Silver, USD, Windows 10 Home, Windows Laptops
AMD Ryzen(TM) R7 4700U Mobile Processor with Radeon(TM) Graphics
14.0-inch FHD (1920×1080) Anti-glare LED Backlight Non- Touch Narrow Border
Dell Pro Back Pack/ Wireless Mouse WM126(Black)
ဂရပ်ဖစ်ကတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းဖို့လိုအပ်တဲ့ Photoshop နဲ့ PC Games အမြင့်တွေကို အသုံးပြုစရာမလိုဘဲ Processing စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းကောင်းနဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်ငန်းသုံး Laptop ရှာနေတယ်ဆိုရင် ဒီ Dell Inspiron 15 5505 Laptop ကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ Working Professionals တွေအတွက် မြန်ဆန်သွက်လက်တဲ့ Computing စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိဖို့ AMD Ryzen(TM) R7 4700U Processor ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဒီ Processor က Intel Core i7-8750H နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တူညီတဲ့ အမိုက်စား CPU တစ်လုံးဖြစ်လို့ ဘယ်လို လုပ်ငန်းသုံးဆော့ဖ်ဝဲမျိုးကိုမဆို သွက်သွက်လက်လက် အသုံးပြုနိုင်စေမှာပါ။ မြင်ကွင်းကျယ်ကျယ်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် မျက်နှာပြင်ကို 14″ အရွယ်အစားနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့ Full HD Resolution ရရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ Anti-Glare နည်းပညာပါဝင်တာကြောင့် ဘယ်လိုနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်နှာပြင် အလင်းမပြန်ဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပါးလွှာတဲ့ မျက်နှာပြင်ဘေးဘောင်ဒီဇိုင်းဖြစ်တာကြောင့် ကျစ်လျစ်တဲ့ ကိုယ်ထည်မှာ ကျယ်ပြန့်တဲ့မြင်ကွင်းကို ရရှိစေမှာပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ တပြိုင်နက် အသုံးပြုနိုင်အောင် CPU ကိုကူညီပေးဖို့ 3200MHz အထိ အမြန်နှုန်းရှိတဲ့ RAM 8GB (DDR4) ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းအတွက် တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ AMD Radeon(TM) Graphics Integrated ဂရပ်ဖစ်ကတ်က ပုံမှန်ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုမှုတွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ ဂရပ်ဖစ်ကတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ HDD ထက် အကြမ်းခံပြီး အသံဆူညံမှုနည်းပါးသလို ဒေတာ Speed ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ SSD 512GB ကို တပ်ဆင်ပေးထားတာကြောင့် Window Loading က စက္ကန့်ပိုင်းပဲ ကြာမြင့်ပြီး ဆော့ဖ်ဝဲ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ပေါ့ပါးသွက်လက်နေမှာပါ။ OS အတွက် Windows 10 Home ကိုတပါတည်း ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် Cracked Version တွေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ Window Update Error တွေအတွက် စိတ်ညစ်ဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ ဘတ္ထရီအတွက် 3Cell ဘတ္ထရီကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီး DVD Drive တော့ မပါဝင်ပါဘူး။ ထူးခြားတဲ့ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး အရောင်ကွဲ အနေနဲ့ ‘Silver’ နဲ့ ‘Eden’ အရောင်တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ Laptop လေးကို လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ စတိုင်ကျကျသယ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက် Dell Pro Backpack အိတ်တစ်လုံးကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီး Wireless Mouse တစ်လုံးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်း တစ်နှစ် ပါဝင်ပါတယ်။
1. Height (Rear): 17.90 mm (0.70"), (Peak): 18.40 mm (0.72"), (Front): 16.74 mm (0.66") | 2. Width: 321.30 mm (12.65") | 3. Depth: 216.20 mm (8.51") | Starting weight: 1.36 kg (3 lb), (Maximum): 1.40 kg (3.09 lb)